DHAAR QOOTA QOOTA AH MIYAA? (Qormo xiiso badan) iyo Qalinkii: Prof. Yaxye Sheekh Caamir
Home » Qormooyinka » DHAAR QOOTA QOOTA AH MIYAA? (Qormo xiiso badan) iyo Qalinkii: Prof. Yaxye Sheekh Caamir	DHAAR QOOTA QOOTA AH MIYAA? (Qormo xiiso badan) iyo Qalinkii: Prof. Yaxye Sheekh Caamir
28/12/2016	1,615 Views 30 xildhibaan hal mar….(( Waxan ku dhaaranayaa Magaca Ilaahay, in aan xilkeyga u gudanayo, si daacad ah oo danta dalka, dadka iyo diintu ku jirto, dhowrana Dastuurka Qaranka, iyo shuruucda kale ee dalka “u yaal”)). Waxaan ku dhaaraneeynaa waa jamac: dhaarta wakill ma la isaga noqon karaa?.
Imaam ayaa yiri: weligeey run iyo been midna kuma dhaaran, been ku dhaaro waa dambi, run ku dhaawo waxaan isaga dhaafay,magaca Alle ee la iguu dhaarinayo ayaa ka weeyn aduunyada iyo waxa dhaxyaal ee aan ku dhaaranayo. Mala weeysa qabay?
Haddii la isku dhaarin lahaa,in aadan laaluush ku soo galin ku dhaaro.kuli waa dhaaran lahaayeen,kii laaluush bixiyay iyo kii kaleba.illeyn macnaha dhaartu ma ahan tii aan naqiin.
wadaadkii saakay ku dhaariyay ayaa galabta kuugu imaanayo wixii uu kaa dhaariyay in aad sameeyso.Qabiilkana waa u dhaartay,qarankana waa u dhaartay,danahooduna waa iska soo horjeedaan.mid walibana sabata uu kuu dhaarinayo waa in uuna ku kalsooneeyn balantaada illaa dhaar lagu kabo. Ogow sayidina Abuubakar,sayid Cumar iyo Asxaabtii kale lama dhaarin.
Qofba si u dhaaray,mid Hal,laba ,sadax ama shanta farood wada saaray,mid gacantiisa kor uga ceshaday,mid dhinac dhigayba.
Waxaan heeysanaa xildhibaano CUCUB ah,shacabkuna waa isaga godlaa cucubka,sida duunyada xoolaad ee aan dhaqano haddii dhashoodu dhimato maqaar cucub ah loogu maalo.
Madaxda dalka ee aan ayagu xildhibaanada aheeyn,wakiilka UN Micheal Keating iyo wakiiladii beesha caalamka iyo safiiradii ahaa kulundiyada shirarka nuucaan ah, ayaan midkoodna imaan dhaarta! Maxaa u qarsan oo ay damacsanyihiin?
Xildhibaanada oo aan isku aragti aheeyn. Xildhibaan la weeydiiyay,yaad isku dan tihiin ayaa yiri: weli ma hayo,badankooda isku qabiil ma nihin,kuwa aan isku qabiilka nahayna isku jilib ma nihin,laba xildhibaan oo kaliya ayaan saaxiib la ahay iyagana waxaa naga dhexeeya isku number ayaan kabaha ka qaadanaa oo kaliya.
Waxaa laga faa’iiday maanta:
a) shirka kadib oo wadooyinka si ku meelgaar ah naloogu furay.
b) dhidid badan oo naga baxay,aniguna Maanta 7.5 Km ayaan lugeeyay.
c) dhaartii nalagu guulguulayay oo mar na dhaaftay.
d) qooyaskii oo maanta wada joogay, abayaashii iyo caruurtii oo helay fursad ay ku wada joogaan.
e) ciidamadii AMISOM oo amaanka lagu aamini waayay iyo kuwii soomalida oo Amisom baaraya.
f) beesha caalamka oo in kasta oo ay baaqatay haddana hambalyo soo dirtay..
g) Aay bintoow oo fahatay Tirina: Baarlamaan camaleeti maas u dhaaranooyaa. Onorobale Dibtaati maas ka wadaa.xildhibaanka, Aloobeey cimrigaa raago.
وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
Wixii khayr noo ah ALLA hana waafajiyo.
Previous: Diblomaasiyiinta Safaaradda Turkiga ee Muqdisho oo noqday kuwa kaliya ee ka qeyb-galay munaasabaddii dhaarinta xubnaha Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Next: DHAGEYSO: Amaanka Muqdisho oo la adkeeyay..